State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi hosts farewell lunch for Ambassador of Brunei Darussalam and spouse – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar, hostedafarewell lunch for Mr Pehin Orang Kaya Seri Pahlawan Colonel (R) Dato Paduka Haji Abdu’r Rahmani bin Dato Paduka Haji Basir, Ambassador of Brunei Darussalam to Myanmar and Dean of the Diplomatic Corp who is leaving Myanmar after completion of his tour of duty in Myanmar and spouse at 12:00 pm on 11 September 2019 at her residence in Nay Pyi Taw.
Also present at the lunch were Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin and spouse.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘရူနိုင်းသံအမတ်ကြီးနှင့် ဇနီးတို့အား နှုတ်ဆက် နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
(၁၁-၉-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် သံတမန်များအဖွဲ့ နာယကဖြစ်သူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Pehin Orang Kaya Seri Pahlawan Colonel (R) Dato Paduka Haji Abdu’r Rahmani bin Dato Paduka Haji Basir နှင့် ဇနီးတို့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နေအိမ်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ၍ နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ဇနီးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။